Android အတွက် BackFire မှရှေးကျိန်စာများကိုဖယ်ရှားပါ Androidsis
BackFire တွင်သင်သည်“ ထူးဆန်း” သောကျိန်ခြင်းခံရမည့်ကျိန်ဆဲသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
BackFire သည်ပရီမီယံဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရှေးရိုးကျိန်စာကိုဖယ်ရှားရန်မှာမစ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Indiana Jones နှင့် the Temple of Doom ရုပ်ရှင်ကားများမှပျောက်ဆုံးနေသောရတနာတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်သောအခါသင်ရှာတွေ့နိုင်သောအရာတစ်ခု။
သူတို့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောရောဂါကဲ့သို့သောကူးစက်ရောဂါများကိုမရင်ဆိုင်ရန်ကံကောင်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောရက်များက Android တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောဤအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်နေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ရက်များကိုလျော့ချရန်။ ကျနော်တို့အထူးနားလည်မှုလမ်းနှင့်အတူကလုပ်ဖို့သွားကြသည် အမျိုးမျိုးသောကျိန်ဆဲခြင်းကို၎င်း၊.
1 BackFire ကိုထည့်သွင်းပါကသင့်ဘဝအတွက်ကျိန်စာသင့်လိမ့်မည်
2 BackFire မှနောက်ဆုံးသူဌေးများသည်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်များကိုကျိန်ခြင်းဘေးမှဖယ်ရှားရန်
ကောင်းပြီ၊ ဒါကမဟုတ်ဘူး၊ ကျိန်စာအကြောင်းပြောတဲ့ဒီဂိမ်းကိုတစ်ခုခုပေးရမယ်၊ ပြီးတော့မင်းဟာမင်းကိုရှားရှားပါးပါးသတ္တဝါအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းန်းကျင်ကိုရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ် သင့်ကိုသူနှင့်ဝေးဝေးနေရန်တားဆီးရန်ကြိုးစားမည့်သူများသည်။
အခြားသူများနှင့်ဆင်တူပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်နေသောရန်သူများကိုအလိုအလျောက်ရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှိပ်ရမည်။ အကြီးမားဆုံးပြproblemနာကကျမတို့နောက်ကျောကိုအလိုအလျှောက်ရိုက်ကူးတာပါ၊ အများစုကသင့်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ ရန်သူ။
လှုပ်ရှားမှုကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကမျက်နှာပြင်ကိုသာနှိပ်ရတော့မယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေကအဲဒီ site ကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်။ တကယ့်ကိုတုန်ခါမှုတွေနဲ့ငါတို့လှုပ်ရှားမှုကို ဦး တည်စီမံတယ်အထက်ဖော်ပြပါရှားပါးသောအဂတိလိုက်စားမှုအဆုံးသတ်သွားသည်အထိဘဝမှတ်မှတ်ကိုနုတ်ပါလိမ့်မည်။ နံရံများနှင့်အတူသတိထားပါ။
BackFire မှာ နောက်ဆုံးအကြီးအကဲများမရှိခြင်းလည်းမရှိ ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုမှာအခက်အခဲများစွာကိုရှာတွေ့ဖို့ ၄ ခုရှိတယ် ထိုနောက်ဆုံးသူဌေးများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောလက်နက် ၈ ခုအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေရန်ထိုနက်နဲသောအရာဖြစ်သည့်အချက်ကိုပေးသည်။ ဤ "Martian" ဂိမ်းအမျိုးအစားများတွင်ဤဂိမ်းများကိုမတူညီသောလက်နက်များတပ်ဆင်ရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်။
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲနှစ်ခုကိုအသုံးပြုနိူင်တယ် တတိယအချက်ကအဲဒါကိုငါတို့သော့ဖွင့်နိုင်တယ် တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဂိမ်းပြီးဆုံးပါပြီ။ ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအခက်အခဲ mode ကသင့်ကိုစမ်းသပ်မှုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်သူအမြောက်အများဟာ Android အတွက်ဒီပရီမီယံဂိမ်း၏ဇတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်ကိုမြင်နေရလို့ပါ။
နှင့်သင်တန်း၏, ငါတို့လည်းနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exorcist ရဲ့သင်္ဘောကိုအဆင့်မြှင့် ရန်သူအပေါ်တွင်ကြီးမားသောမီးများဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်ရန်ဒြပ်စင်အမျိုးမျိုးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤဂိမ်း၏ဆွဲဆောင်မှုများမှာကူးစက်ရောဂါရှိသူအားလုံးအတွက်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ သတိမထားပါနဲ့ လ၏အကောင်းဆုံး Androidsis ဂိမ်း နှင့် Aprilပြီလ၏အအေးဆုံး.
Un နောက်ပြန်ရိုက်ရတဲ့အဘယ်ကြောင့်စပ်စုဂိမ်း ကျနော်တို့လွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်နောက်သို့လိုက်ရန်ကြိုးစားစဉ်နှင့်သူတို့အား critters ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ကို "အမဲလိုက်ခြင်း" သောအခါ, ငါတို့ကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားပုံကိုမြင်ရလိမ့်မည် အချိန်ကိုမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်နှင့်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာနှိပ်လိုက်ပါ။
BackFire သည်ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ထိုအခက်အခဲကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မီနူးများတွင်လည်းအတွေ့အကြုံကောင်းများထပ်မံပေါင်းထည့်ရန်အပိုအချက်ရှိသည်။ အခုတော့ ၃.၁၉ ယူရိုကိုပေးရမယ်။ အဲဒါကိုထိုက်တန်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြော်ငြာမရှိခြင်းနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာအားလုံးရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါကကောင်းစွာလက်ခံပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်အလွန်အမင်းဝေးသွားပြီဟုကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုခုပြောထားသည်။
BackFire သည်ယနေ့ခေတ်တွင်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးပို့ဖို့ ဂိမ်းတစ်ခုသည်အဆင့်အားလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့တောင်းသောယူရိုယူရိုနှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုခံစားမှုမပေးချေ။
ရေးသားသူ: GREY SQYD
စျေးနှုန်း: € 1,09
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » BackFire တွင်သင်သည်“ ထူးဆန်း” သောကျိန်ခြင်းခံရမည့်ကျိန်ဆဲသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
Sony Xperia L4 ကိုဥရောပတွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ